Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Crime » Agbapụ agbapụ: Pentagon Building on Lockdown
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • Akụkọ Ọchịchị • News • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
PFPA kwuru na ụlọ Pentagon dị na Arlington, Virginia - isi ụlọ ọrụ nke Ngalaba Nchebe United States - nọ na mkpọchi n'ihi "ihe mere" n'ọdụ ụgbọ oloko nke ihe owuwu ahụ.
Pentagon nọ na mkpọchi mkpọchi n'ihi "ihe mere."
Dịka akụkọ siri kwuo, ọtụtụ mmadụ merụrụ ahụ ka agbapụsịrị egbe.
Arlington Fire and Emergency Medical Service gosipụtara na ha na -aza “ihe ike ime ihe ike”.
Pentagon Force Protection Agency (PFPA) kwupụtara na ụlọ Pentagon abanyela na mkpọchi, mgbe akụkọ banyere mgbọ gbara na ọtụtụ mmadụ merụrụ ahụ, na -arịọ ọha na eze ka ha nọrọ ebe ahụ.
N’ụtụtụ tweet Tuesday, PFPA kwuru na ụlọ Pentagon dị na Arlington, Virginia - isi ụlọ ọrụ nke Ngalaba Nchebe United States - nọ n’ọnọdụ mkpọchi n’ihi “ihe mere” na ọdụ metro nke ihe owuwu ahụ, na -enyeghị nkọwa ndị ọzọ. .
Ndị ọrụ nchekwa Pentagon Force zigakwara ozi na -agwa ndị ọrụ niile ka ha nọrọ n'ụlọ ahụ.
Dị ka ụfọdụ akụkọ mpaghara a na -ekwetabeghị, ọtụtụ mmadụ, gụnyere onye uwe ojii, merụrụ ahụ mgbe agbachara egbe. Otu onye ọrụ gọọmentị nke kwuru ka a ghara ịkpọ aha ya kwuru na opekata mpe otu onye dara, n'agbanyeghị na amaghị ọnọdụ ha.
Ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ na ahụike mberede nke Arlington gosipụtara na Twitter na ha na -azaghachi "ihe ike ime ihe ike". Na tweet ọzọ, ha gosipụtara na ha zutere ọtụtụ ndị ọrịa nakwa na “ọnọdụ ahụ ka na -arụ ọrụ.”
Ihe onyonyo a na -ekerịta na mgbasa ozi ọhaneze pụtara igosi CPR ka a na -elekọta ma ọ dịkarịa ala mmadụ abụọ. O doghị anya ma ọ bụrụ na ejidere onye ọ bụla, ma ọ bụ mmadụ ole mepere ọkụ.
Nkwupụta na Pentagon n'onwe ya kwuru na mkpọchi a bụ "ọrụ ndị uwe ojii". E nyere iwu ka ụgbọ oloko ụgbọ oloko gafee ọdụ ụgbọ ahụ ka ọrụ ndị uwe ojii wee nwee ike ịga n'ihu n'enweghị ihe mgbochi.